I-Chiefs ikhokhobela injini yomdlali - Ilanga News
Home Ezemidlalo I-Chiefs ikhokhobela injini yomdlali
Izama ukuthola owakuleli osePortugal
UKAMOHELO Mahlatsi ongumdlali wasesiswini weSwallows FC, kuvela ukuthi ufunwa uthuli yiKaizer Chiefs. ISITHOMBE NGABE: BACKPAGEPIX
IKHOKHOBELA isilomo seSwallows FC iKaizer Chiefs engazibekile phansi emakethe kulezi zinsuku njengoba ilwela ukubuyisa isithunzi sayo ngesizini ezayo. ILANGA lihletshelwe wumthombo walo ukuthi iChiefs ifuna uKamohelo Mahlatsi (23), odlala esiswini kwiSwallows. UMahlatse ujoyine iSwallows kumasizini amabili edlule esuka kwi-University of Pretoria abebolekiswe kuyona yiSuperSport United. Kuvela ukuthi iChiefs isike yaxoxa ngisho nomphathi kaMahlatsi, uMike Makaab ngodaba lwakhe, kodwa wayimisa kwazise iSwallows ibimatasa nemidlalo yokuhlungela ukudlala kwiDStv Premiership esongwe ngoLwesithathu. IziNyoni yizo ezigcine zinqobile kule midlalo ngokuhlula i-University of Pretoria ngo-1-0 emdlalweni wokugcina obungoLwesithathu.
Umthombo waleli phephandaba uthe: “IChiefs ifuna ukusayinisa ulozolo lwabadlali. Iphansi phezulu ifuna uMahlatse ogila izimanga kwiSwallows. Cishe konke kuzocaca maduze kwazise iSwallows ibimatasa idlala ama-play off, ibingafuni ukuyiphazamisa.” UMakaab ebuzwa yileli phephandaba ngalolu daba, uthe: “Ngingakusho ngingananazi ukuthi (iChiefs) iyamufuna, inkinga wukuthi iSwallows ibisaqedela ama play off.” Limbuza leli phephandaba eyokuthi iChiefs ifuna noKobamelo Kodisang (22) odlala kwi Sporting Braga B yasePortugal, uthe: “Udaba lukaKodisang luseyindida ngoba usasalelwe yinkontileka yeminyaka emibili neBraga. Ebesikuzama wukuthi imbolekise, inkinga wukuthi kasizazi izinhlelo zomqeqeshi weqembu elikhulu ngaye ukuthi zithini, okwenza udaba lwakhe lube yindida.
“Akhona amakilabhu amfunayo, yikhona ukuthi kasizimisele ngokumsusaunomphelo e-Europe, sifuna ukuthi abolekiswe lapho ezodlala khona.” ILANGA lihabule nokuthi ngaphandlekwalo mdlali, iChiefs ifuna noDillon Solomons odlala emuva kwesokudla noLehlogonolo Matlou oyibamba esiswini kuzo iziNyoni. UVina Maphosa wezokuxhumana kwiChiefs, ebuzwa ngalolu daba, uthe kakukho angakusho okwamanje ngoba basasekhefini
lokuvalwa kwesizini. Uthe uma kukhona okwenzekayo bazomemezela.
Previous articleKuboshwe iphoyisa lesifazane “elidubule labulala umngani”
Next articleBAKHUNGATHEKILE NGONYAMALALE ENDAWENI YOBUMNANDI